Hiran State - News: Ciidamada Amisom oo dal baday iney gooyni u dagalka u galaan kadib markii la xaqiijiyey in ciidmada TFgda ku jiraan ciidamo Shabaab taageersan oo Shariifka ka amar qaata.
Ciidamada Amisom oo dal baday iney gooyni u dagalka u galaan kadib markii la xaqiijiyey in ciidmada TFgda ku jiraan ciidamo Shabaab taageersan oo Shariifka ka amar qaata.
Breaking News: Ciidamda Amisom oo dal baday iney gooyni u dagalka u galaan kadib markii la xaqiijiyey in ciidmada TFgda ku jiraan ciidamo Shabaab taageersan oo Shariifka ka amar qaata ay dhabarka ka toogteen ciidmada Amisom.
Saraakiisha sar sare ee Amisom oo kulan kula qaatay magaalada Mogdisho Shiikh Shariif ayaa sheegay ineysan diyaar u aheyn iney ka dhax dagaalamaan ciidamada TFGda kadib markii ay sirdoonka ciidamada Amisom qireen iney jiraan ciidamo si toos ah ugu xiran Shabaab oo ka amar qaata mid ka mid ah masuuliyiinta TFGda oo loo maleynayo Shariifka iney ciidamadooda dhabarka ka toogtaan.
Shariifka ayaa durbadiiba qorshahaas ogolaaday waxeyna arintaan suurogelineysaa in Shabaab si gooyni ah ay ciidamada Amisom talaabo uga qaadaan iyagoo marka kuwa TFGda laga itaal roonaado uun caawinaya. sida laga warqabo TFGda ciidamo u dhisan qaab qaran ma qabaan marka iyaga gooyni loo saaro waxey noqon doonaan kuwo qoryahay iska furta madama ay u dhisan yahiin qaab qabiil, waxeyn atani fududeyneysa in beelkasta wiilasha ciidmada TFGda kaka jira kal abaxdo oo ku xoreysato deganada ay ka soo jeedo halkaasina isku soo haraan ookaliya intii Shabaab la shaqeyn jirtay oo kaliya iyo shariifka.kadibna waxaa bilaaban doono in la bartilmaamedsado mudanayasha baarlamanka iyo masuuliyiin badan.
Dhinaca kale wadamada reer galbeedka ayaa siweyn u dhaleceeyey hadalkii Shariifka uu kaka horyimid dagaalka ay Shabaab ku qaadeen ciidamo ka soo jeeda jubooyinka iyo kuwa Kenya laguna wiiqayey awooda Shabaab, sidoo kale waxaa fashil ku dhamaaday dibad baxyo ay qaar Somalida qurbaha ku doonayeen iney ku taageeraan hadalkii Shariifka iyadoo wadamada qaarkood ciidamadooda nabadgalyada u sheegeen iney xabsiga u taxaaban cidii ka soo horjeesata dagaalka lagula jiro Shabaab loona arko argagixiso cidii taageerta hadalka Shariifka taasi oo meesha ka saartay iney ku dhiiradaan dibad baxyadii ayqaban qaabin lahayeen.
Wadamada qaarkood waxey shegeen ineysan xireyn laakisne raad raac ku sameyn doonaan cidii iskugu soo baxdo banaanbax lagu taageerayo hadalka Shariifka. sida muuqata hadalki shariifka waxaa laga soo dhaweeyey oo kaliya qeybo ka tirsan magaalada Mogdisho oo kaliya halka aduunyada iyo inta badan Somaliweyn laga taageerayo cidkasta oo Shabaab iyo argagixisada la dagaleysa.
Dowlada Kenya iyo ciidamada ka soo jeeda degaanka Jubooyinka ee dagaalka ba'an kula jira Shabaab ayaa laga yaabaa iney maalmaha soo socda helaan taageero dhinac kasta leh maadama ay dagaal kula jiraan argagixisada Shabaab iyo ajaaniibtooda.
Go,aanka ciidamda Amisom ay gaaren maanta ee ah iney gooyni dagaalka u galayaan ayaa muujineysa sida ay hada Shariifka ugu aamin baxeen. dowladaha deeqda bixiya oo saraakiisha Amisom su,aalo weydiiyey waxa ay dagaalka u joojiyeen ayaa sheegay in ay ku jahwarereen siyaasada Shariifka oo isagu markasta markii ay guulo gaaraan ka joojiya dagalka si ay Shabaab u sii joogaan dalka amaba Mogdisho.
Dowlada Kenya ayaa hadii ay joojiyaan dagaalka ay kula jirto Shabaab gobolada Jubooyinka waxaa laga yaabaa iney Shabaab gudaha dalkeeda soo galaan kedibna halkaas ka geystaan dhibaato ka badan mida ay Somaliya ku hayaan. inkasta oo sida lagu soo waramayo qorshaha Kenya yahay sidii ay u xaqiijin laheyd nabadgalyada xaduudeeda hadane waa lama huraan in jubooyinka loo helo maamul ka shaqeeya danaha shacabka degaanadaasi marka ay meesha ka baxaan Shabaabka hada ku sugan.
Soo gelitaankii Kenya soo gashay Somaliya waxuu aduunyada tusiyey in Shariifka xiriir qote dheer la leeyahay Shabaab iyo Al-qacida sidoo kale arintaan waxey meesha ka saareysaa in Shariifka doorashada soo socota guulo la taaban karo ka keeno maadama uu kooxo nabadiid ah doonayo iney ku sii nagadaan Geeska Africa sida Shabaab iyo Al qacida.
· admin on October 26 2011 15:51:53 · 0 Comments · 1493 Reads ·
14,568,888 unique visits